सायद यो क्यासिनो वातावरण वा नयाँ टेबल गेमको विदेशी नामहरू हो, तर पोकर तालिकामा हिंड्ने चिन्ता महसुस छैन। नडराऊ यदि तपाईंलाई पाँच-कार्ड स्टड पोकरको मूल कुराहरू थाहा छ भने, तपाईं दाँया मा फिट हुनेछ क्यारेबियन स्टड पोकर तालिका। केवल सम्झना छ कि तपाईं डीलर विरुद्ध खेल्दै हुनुहुन्छ अन्य खेलाडीहरू होइन, त्यसैले तपाईं सबैको रणनीति अन्वेषण गर्न चिन्ता गर्नुपर्दैन। हामी सुझाव छैनौं, यद्यपि, कि क्यारिबियन स्टड पैसा जित्न एक राम्रो तरिका हो र तपाईं बस्न सक्नुहुनेछ र केहि समयसम्म आराम गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि तपाईं संग, पाई-गो पोकर भन्न सक्नुहुन्छ।
तालिकामा जानुहोस् र एन्ट चिन्ह लगाइएको बक्समा शर्त राख्नुहोस्। यस समयमा, तपाईंले चिन्हित ठाउँमा एक $ 1 प्रगतिशील शर्त पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं एक फ्लश, पूर्ण घर, चार-एक-किसिम, सिधा फ्लश वा शाही फ्लश निस्कनु भएको छ र $ 1 प्रगतिशील शर्त राख्नुभयो भने, तपाइँ अतिरिक्त पैसा जित्नुहुनेछ। यो पैसा क्यासिनोबाट क्यासिनोमा पर्दछ, त्यसैले तपाईंको डीलरसँग जाँच गर्नुहोस्। बाधाहरू स्लिम छन् कि तपाईंले यी उच्च भुक्तानी हातहरू निलम्बन गर्नुहुनेछ, तर तपाइँ यो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि यो थप शर्त तपाईंको र तपाईंको बैंकबुकको लायक छ वा छैन।
एंटे र कुनै प्रगतिशील शर्तहरू राखे पछि, सबै खेलाडीहरू र डेलर प्रत्येक पाँचवटा कार्डहरू पेश गरिनेछ। खेलाडीहरूको कार्ड अनुहारमा छ र व्यापारीले चारवटा कार्डहरू अनुहारमा राख्छन् र एक अनुहारमा राख्छन्। अब, अगाडि जानुहोस् र आफ्नो कार्डहरू हेर्नुहोस्। त्यसपछि, डेलरको एक अनुहार कार्ड हेर्नुहोस्। अब, तपाईंको कार्ड फेरि हेर्नुहोस्। ठीक छ, धेरै लामो लिन प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईंको निर्णय सरल छ। के तपाइँसँग आधारभूत पोकर हात रैंकिंगमा आधारित विजेता हात छ? यदि तपाईंसँग बिल्कुल केहि छैन भने पनि एक जोडी पनि होइन। तुरुन्तै, तपाईंले आफ्नो एन्टी शर्त गुमाउनुहुनेछ र यदि छ भने, तपाईंको प्रगतिशील शर्त। टेबलमा तपाईंको कार्ड राख्नु भएको यो डीलरको चिन्ह हो जुन तपाईं यो हातबाट बाहिर हुनुहुन्छ।
यदि, तथापि, तपाइँसँग एक प्ले योग्य हात छ, सायद एक जोडा वा सीधा, र तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईं दलरको हातलाई हराउन सक्नुहुनेछ, यो अतिरिक्त शर्त राख्नको लागि समय हो। बाकसमा बक्समा राखिएको छ, तपाईंले एन्ट शर्तको दुई पटक दोहोर्याउनु पर्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईको एन्टिट शर्त $ 10 थियो, तपाइँले $ 20 लाई बेट बक्समा राख्नुपर्दछ।
एक पटक सबै खेलाडीहरूले निर्णय गरेका छन् वा खेल खेल्न वा गुनासो गरे, व्यापारीले आफ्नो हात प्रकट गर्छ। दुर्भाग्यवश, तपाईंको हात उनको पिटाइजस्तै सरल छैन। डेलरको हातमा एसी र राजाको न्यूनतम पोकर ह्यान्ड रैंकिंग हुनु पर्दछ। यदि उनको कार्डहरूले न्यूनतम हात समावेश गर्दैन भने, त्यो जोड्छ। त्यस समयमा, खेलाडीहरू खेलमा रुँदै, 1: Ante शर्तमा 1 बाधाहरू प्राप्त गर्छन्। यद्यपि, दोस्रो माध्यमिक शर्त तिनीहरूलाई अतिरिक्त पैसाको साथ फर्काइएको छ। हाम्रो उदाहरणको साथ जारी राख्नुहोस्, तपाईले आफ्नो वास्तविक $ 10 एन्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ, साथै एक अतिरिक्त $ 10, र तपाईंको $ 20 को मौलिक शर्त फिर्ता फर्काइनेछ।
यदि डीलरको हातमा कम से कम एक अक्का र राजा समावेश छ भने, उसले प्रत्येक खेलाडिको विरुद्ध पारंपरिक पोकर ह्यान्ड रैंकिंगमा आधारित खेलको साथ आफ्नो हात खेल्नुपर्छ। यदि तपाईंको हात डीलरको धारण गर्दछ भने, तपाईं आफ्नो एन्ट शर्त मा पनि पैसा जित्नुहुन्छ। तपाईंको सेकेन्ड शर्तको लागि, यस प्रकारका समस्याहरू निम्नानुसार छन्:
???? € 4480 जम्मा छैन
???? 260 फ्री spins
???? £ 1280 जम्मा छैन
💵 $ 2360 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस
💵 $ 1590 NO DEPOSIT BONUS
💵 € 380 मुफ्त चिप कैसीनो
💵 195 नि: शुल्क स्पिनहरू
💵 655% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 यूरो 355 जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 EUR 105 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 480% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 £ 4960 जम्मा रकम छैन
💵 945% जम्मा जमा बोनस
💵 यूरो 135 नि: शुल्क नगद
💵 पाउन्ड 560 नि: शुल्क कैसीनो टिकट
💵 EUR 665 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 430% स्वागत बोनस
💵 € 3180 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 440% जम्मा मिलान बोनस
💵 $ 245 डेली फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 यूरो 420 मुफ्त CHIP
💵 EUR 490 फ्री चिप
💵 290% बोनसस क्यासिनो
💵 135% पहिलो जम्मा बोनस
💵 € 2325 जम्मा बोनस कोड
💵 £ 80 NO DEPOSIT BONUS CASINO
💵 250 वफादार नि: शुल्क प्रायः!
💵 $ 215 नि: शुल्क पैसा
💵 पाउन्ड 66 डेली फ्रीरल स्लट टूर्नामेंट
💵 540% कुनै नियम बोनस!
💵 यूरो 470 नि: शुल्क चिप
💵 215 नि: शुल्क स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 66 परीक्षण स्पिन
💵 15 नि: शुल्क स्पिनहरू
💵 915% पहिलो जम्मा बोनस
💵 € 310 मुक्त कैसीनो चिप
💵 € 295 मुक्त कैसीनो चिप
💵 € 333 अनलाइन कैसीनो टूर्नामेंट
💵 275 नि: शुल्क जम्मा कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 यूरो 2780 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो
💵 $ 550 अनलाइन क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 750% मिलान बोनस
💵 $ 55 नि: शुल्क क्यासिनो चिप
💵 190% म्याच बोनस क्यासिनो
💵 $ 445 FREE कैसीनो चिप
💵 € 545 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 135% साइन अप क्यासिनो बोनस
💵 160 वफादार नि: शुल्क प्रायः!
💵 $ 1045 जम्मा रकम छैन
💵 $ 125 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 455% कुनै नियम बोनस!
💵 $ 625 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 Eur 1420 NO DEPOSIT BONUS CODE
💵 € 440 नि: शुल्क कैश
💵 $ 635 नि: शुल्क नगद
💵 $ 160 अनलाइन क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 115 नि: शुल्क जम्मा कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 यूरो 4555 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 950% म्याच बोनस क्यासिनो
💵 $ 1965 NO DEPOSIT BONUS CASINO
💵 € 150 मुक्त कैसीनो चिप
💵 € 190 फ्री कैसीनो चिप
💵 € 3355 जम्मा जमा बोनस
💵 यूरो 450 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 यूरो 88 नि: शुल्क कैसीनो टिकट
💵 725% कुनै नियम बोनस!
💵 यूरो 395 नि: शुल्क चिप कैसीनो
💵 € 1130 NO DEPOSIT
💵 890% जम्मा जमा बोनस
मिनी-बाककाटमा सबै कार्डहरू व्यापारीले काम गरेका छन्। प्रत्येक प्लेयरले निर्धारण गर्न कति कटिबद्ध हुन्छ, र चाहे ...
जंगलमा गहिरो हेड गर्नुहोस् र तपाईंको अस्तित्वका कुञ्जीहरू परीक्षणमा राख्नुहोस्। तपाईंले मित्रको मिश्रण पाउनुहुनेछ ...
यो एक उत्कृष्ट मजेदार खेल हो कि खेल्न को लागी साँच्चै पैसा कमाउन को लागी सजिलो छ। बस रोल ...
उत्कृष्ट चार स्लॉट खेल मार्वल सुपरमार्केटमा आधारित छ। साधारण मानिसहरू अहिले सुपरपावर छन्। खेलाडीहरूले देख्नेछन् ...
पई गौ पोकर नियमित पोकर र पाई गाउको खेलको एक रोमाञ्चक संयोजन हो। नियमित डेक ...
लकी leprechauns लूट
लकी लेप्रेचाको लुत्ते पुष्प पृष्ठभूमि संग हरियो रेजिन मा सेट गरिएको छ र बीच को भित्र एक इंद्रधनुष ...
यदि तपाईं कहिल्यै उच्च हाईल्याण्डहरूमा सुन खोज्ने बारे सपना देख्न सक्नुहुनेछ शायद यो प्रयास गर्न को लागि धन्यवाद ...
सांता आश्चर्यचकित स्लॉटहरू Playtech द्वारा एक भिडियो स्लट खेल हो। Playtech एक गेमिंग सफ्टवेयर कम्पनी हो जसले प्रदान गर्न माहिर छ ...
क्रिसमसलाई कम गर्नको लागी एक समय हो, आराम र चीजहरू सजिलो र उत्सव स्लटहरू धेरै अधिक राखिएको छैन ...
यूकेको मनपर्ने अनलाइन क्यासिनो मध्ये एकमा छुट्टै छुट्टिहरु स्लॉट संग हरेक वर्ष क्रिसमसको उत्सव मौसमको आनन्द लिनुहोस् ...
Cyberstud पोकरको सारांश। Cyberstud पोकर एक धेरै अनोखी र रोचक पोकर खेल हो। खेलमा आरटीटी (रिटर्न ...
गुलाबी तत्वहरू6रिल्स र Thunderkick सफ्टवेयरद्वारा संचालित 4096 paylines सँग भिडियो स्लॉट हो। यो स्लट प्रेरित छ ...
Cops 'n' Robbers एक समयहीन विषय हो जसले वर्षौंमा अनगिनत स्लट मिसिनहरू भरिन्छ। जबसम्म मानिसहरू ...
यदि तपाईं दिनहरूको लागि लामो समयसम्म हुनुहुन्छ भने एक हात बाल्टीहरू एक मात्र प्रकारको स्लॉट एक खेल खेल्न सक्छ ...
जंगली वाइकिंग एक प्रगतिशील खजाना खेल हो जुन प्रमुख गेमिंग सफ्टवेयर प्रदायक प्रविधी द्वारा संचालित छ र अधिक मा प्रदान गरिएको छ ...
क्यारिबियन स्टड पोकर अपडेट गरिएको: जनवरी 19, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 क्यारिबियन स्टड पोकर
3.0.0.0.1 मिनी बेकन
3.0.0.0.2 जंगल समस्या
3.0.0.0.3 रोलोक्रोस्टर पासा
3.0.0.0.4 उत्कृष्ट चार
3.0.0.0.5 पाई गोव पोकर
3.0.0.0.6 लकी leprechauns लूट
3.0.0.0.7 ओक्टोपसको आँखा
3.0.0.0.8 जियोसन रैप
3.0.0.0.9 क्यालिफोर्निया सुनहरा
3.0.0.0.10 ब्रायनको जीवन
3.0.0.0.11 Paco र popping मिर्च
3.0.0.0.12 पृथ्वीमा के
3.0.0.0.13 सांता आश्चर्य
3.0.0.0.14 क्रिसमस जोकर
3.0.0.0.15 शुभ छुट्टियाँ
3.0.0.0.16 साइबर्स्टुड पोकर
3.0.0.0.17 गुलाबी हात्ती
3.0.0.0.18 Cops 'n' robberers millionaires row
3.0.0.0.19 बेवर्ली हिल्स 90210
3.0.0.0.20 हाउओगोंग घाटी
3.0.0.0.22 समुद्री डाकू को खजाने डिलक्स
3.0.0.0.23 जंगली भिकिंग
3.0.0.0.24 आयरन मैन3खरोंच